Dab Dhimasho iyo Dhaawac Keenay oo Ka Dhacay Magaalada Bosaso • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Dab Dhimasho iyo Dhaawac Keenay oo Ka Dhacay Magaalada Bosaso
Abaara subaxnmadii maanta (13 June 2010) ayaa dab xoogani waxaa ka kacay Kaamka la yiraahdo “Kaam Shabelle” oo kuyaala dhanka bari ee Magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari.
Dabkan khasaaraha gaystay ayaa waxaa ku dhintay 1-qof oo sida la sheegay ahaa Curiyaan,sidoo kale waxa uu dhaawac soo gaaray 10-qof iyadoona ay ku basbeeleen ku dhawaad 2000 oo buush.
Dabkan ayaa ka kacay sida ay Horseed Media u sheegeen dadka dhibaatadu gaaratay kuwaasi oo sheegay in dabku uu ka kacay buush ka sameysan baco iyo kartoomo uu degena nin iskaabulo ah.
Waxyeelada ugu badan ayaa la sheegay in u soo gaaray Caruur yar yar ah oo sida la sheegay ku sugnaa buushashka dabku qabsaday xiligaasi oo ay ka maqnayeen waalidiintii dhalay oo ku maqnaa raashin qaybin laga waday gudaha Kaamka.
Dadka ay dhibaatadu soo gaartay ayaa ka codsaday Maamulka Puntland,ganacsatada,Hay’adaha gargaarka caalamiga ah in ay la soo gaaraan gargaar deg deg ah.
Dabka oo saacado kooban socday ayaa waxaa ka qayb qaatay damintiisa booyado tiro yar iyo dadka xaafadda uu dabku ka kacay kunool iyadoo uu iskiisa u damay dabkaasi.
Duqa degmada Boosaaso Max’uud Faarax Beeldaaje oo gaaray Kaamka Shabelle oo ah halka uu dabku ka kacay isagoona ugu baaqay dadii dhibaatadu soo gaartay in ay isdejiyaan.
Max’uud Faarax Beeldaaje ayaa baaq u diray Hay’adaha caalamiga iyo ganacsatada Puntland in ay gar gaar la soo gaaraan walaalahooda dhibaatadu gaartay.
Waa dabkii saddexaad ee qabsada xeryaha ay ku jiraan dadka ka soo barakacay qaybaha kale ee Soomaaliya iyo weliba Itoobiya, waxaana waqtiyadan oo kale ka dhaca magaalada Bosaso kuleyl aad u daran kaas oo wata dabaylo, dabka u danbeeyey ayaa dhacay 07 June 2010 .
Magaalada Bosaso ayaa iska leh hal gaari oo dabdemis ah kaas oo oo ah nooc hore oo duug ah isla markaana aan awood u lahayn in uu dababka caynkan oo kale ah wax ka qabto, waxaana dabkan lagu tilmaamey i uu ahaa mid khasaaro badan dhaliyey.
Magaalada Bosaso ayaa khatar weyn ugu jirta dabka soo noqnoqda, waxaana magaalada dul mara xargo koronto iyo kuwo taleefano kuwaas oo aad u badan, lagama aamin qabo in dabka ka kaca inta badan xeryaha qaxootigu in uu ku sii fidi karo magaalada.
Cabdisalaam Axmed Shire